Reading Week (1) - Smart OET Training Centre
Categories: Online Reading
Reading Test Format
Welcome To Smart OET Training Centre 🔸 Smart OET ရဲ့ Reading Course မှ ကြိုဆိုပါတယ် 🔸 ဒီ Video ထဲမှာ Reading Test Format အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ် 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို ချိန်လို့ ရပါတယ် 🔸 Computer မှာ Full screen mode / Phone မှာ Rotate Screen နဲ့ကြည့်ရင်လဲ စာလုံးတွေ ပိုဖတ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ် Reading Format + Part (A) 🔸Duration = 21 minutes ... Read more Reading Test Format
Day 1 Lessons ➡ Day 1 တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Reading Test (1) - Part (A) Vocabulary Exercise (1) ➡ Day 1 ဖြစ်သောကြောင့် Online Course နှင့် ရင်းနှီးမှုရှိစေရန် ဉီးစားပေးလေ့ကျင့်ပေးထားပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark complete ကို နှိပ်၍ သင်ခန်းစာများသို့ သွားနိုင်ပါသည်
Reading Test (1) – Part (A)
How to Answer 🔸 ပေးထားသော Text ၄ခု ကို ဖတ်၍ မေးခွန်းများကို ဖြေပါ🔸 Text များကို ခပ်သွက်သွက် Scan လုပ်ပြီး ဖတ်၍ Matching မေးခွန်း အမျိုးအစားကို ဖြေပါ🔸 ထို့နောက် စာပိုဒ်များ၏ အနေအထားကို သိလာသောအခါ Short Questions နှင့် Sentence Completion အမျိုးအစားများကို ဆက်လက်ဖြေပါ🔸 ပေးထားသော စာပိုဒ်များမှ အဖြေကို ကူးရေးရသောကြောင့် စာလုံးပေါင်းများ မှန်ဖို့ လိုပါသည်🔸 Phone နှင့် ကြည့်လျှင် Screen Rotation လုပ်ပြီး ဖတ်လျှင် ပိုအဆင်ပြေပါသည်🔸 အဖြေများကို ဖြေပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ🔸Course Book စာအုပ်မှ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်၍ စာအုပ်ထဲတွင်‌ ဖြေပြီး အဖြေတိုက်လဲ ... Read more Reading Test (1) – Part (A)
Vocabulary Exercise (1)
Vocabulary (A) ဤလေ့ကျင့်ခန်းများတွင် Vocabulary အသစ် Verb များကို လေ့လာရပါမည်ဤ List သည် Vocabulary List (A) ဖြစ်ပါသည်အောက်တွင်ပေးထားသော Verb များကို တစ်ခုစီ နှိပ်ပြီး လေ့လာပါVerb တစ်လုံးစီတွင် Definition နှင့် Examples များကို လေ့လာနိုင်ရန် ထဲ့ပေးထားပါသည်လေ့လာပြီးလျှင် အောက်မှ Exercise များကို လေ့ကျင့်ပါ Concern Back Title 🔸 1. cause worry to someone🔸 စိုးရိမ်စေသည်🔸 e.g. It concerns me that he hasn't been in contact.🔹 2.relate to; to involve someone ... Read more Vocabulary Exercise (1)
Vocabulary Exercise (2)
Vocabulary (B) ဤလေ့ကျင့်ခန်းများတွင် Vocabulary အသစ် Verb များကို လေ့လာရပါမည်ဤ List သည် Vocabulary List (B) ဖြစ်ပါသည်အောက်တွင်ပေးထားသော Verb များကို တစ်ခုစီ နှိပ်ပြီး လေ့လာပါVerb တစ်လုံးစီတွင် Definition နှင့် Examples များကို လေ့လာနိုင်ရန် ထဲ့ပေးထားပါသည်လေ့လာပြီးလျှင် အောက်မှ Exercise များကို လေ့ကျင့်ပါ Defy Back Title 🔸 openly resist or refuse to obey🔸 ခုခံသည်၊ ငြင်းဆန်သည်🔸 e.g. She defied her parents and dropped out of school. Refute 🔸 say ... Read more Vocabulary Exercise (2)
Congratulation! You have completed Day 1 Lessons. Summary of Day 1 Lessons Reading Test (1) - Part (A) Vocabulary Exercise (1) ➡ Day 1 ဖြစ်သောကြောင့် Online Course နှင့် ရင်းနှီးမှုရှိစေရန် ဉီးစားပေးလေ့ကျင့်ပေးထားပါသည် ➡ နောက်ရက်များတွင် သင်ခန်းစာများကို ထပ်တိုး၍ လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ Day 1 သင်ခန်းစာများ အပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် Day2သင်ခန်းစာများကို ဝင်လေ့လာ၍ ရပါသည် ➡ လေ့လာပြီးသား သင်ခန်းစာများကိုလည်း အချိန်မရွေး ပြန်လေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark ... Read more Day 1 Summary
Day2Lessons ➡ Day2တွင်လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာများမှာ Reading Part (B) Format Reading Test (1) - Part (B) Reading Sample (1) - Part (B) ➡ Day2တွင် Part (B) Format ကို လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဖြေဆိုရပါမည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark complete ကို နှိပ်၍ သင်ခန်းစာများသို့ သွားနိုင်ပါသည်
Reading Part (B) Format
🔸 ဒီ Video ထဲမှာ Reading Part (B) Format အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ် 🔸 Video ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေ ကြည်အောင် Resolution ကို ချိန်လို့ ရပါတယ် 🔸 Computer မှာ Full screen mode / Phone မှာ Rotate Screen နဲ့ကြည့်ရင်လဲ စာလုံးတွေ ပိုဖတ်လို့ အဆင်ပြေပါတယ် Reading Part (B) Format 🔸Duration = 22 minutes 🔸 Video ကိုကြည့်ပြီးလျှင် Mark Complete ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
Reading Test (1) – Part (B)
Part (B) How to Answer 🔸 Multiple Choice မေးခွန်းများကို (A, B, or C) မှန်ရာတစ်ခုကို ရွေးပြီး ဖြေဆိုရပါမည်🔸 မေးခွန်း (၆)ခုကို အဖြေများကို ရွေးပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ🔸Course Book စာအုပ်မှ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်၍ စာအုပ်ထဲတွင်‌ ဖြေပြီး အဖြေတိုက်လဲ ရပါသည် How to Check 🔸 မေးခွန်း (၆)ခုကို အဖြေများကို ရွေးပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေပြီးမှသာ Finish ခလုတ်ပေါ်လာပါမည် ဖြေပြီးလျှင် Explanation Video ကိုကြည့်ပြီး ရှင်းချက်များကို လေ့လာပါ🔸 ပြီးလျှင် Mark Complete ကို နှိပ်၍ ... Read more Reading Test (1) – Part (B)
Reading Sample (1) – Part (B)
Part (B) How to Answer 🔸 Multiple Choice မေးခွန်းများကို (A, B, or C) မှန်ရာတစ်ခုကို ရွေးပြီး ဖြေဆိုရပါမည် 🔸 မေးခွန်း (၆)ခုကို အဖြေများကို ရွေးပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ 🔸ဤမေးခွန်းသည် Course Book စာအုပ်ထဲတွင် မပါဝင်ပါ 🔸လေ့ကျင့်ခန်းများများ လုပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ OET Official မှ Exercises များကို တင်ပေးထားပါသည် How to Check 🔸 မေးခွန်း (၆)ခုကို အဖြေများကို ရွေးပြီးလျှင် Finish နှင့် Show Solution ခလုတ်များကို နှိပ်ပြီး အဖြေတိုက်ပါ 🔸 အဖြေတိုက်ပြီးလျှင် Mark Complete ကို နှိပ်၍ ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ပါသည်
Congratulation! You have completed Day2Lessons. Summary of Day2Lessons Reading Part (B) Format Reading Test (1) - Part (B) Reading Sample (1) - Part (B) ➡ Week 1 ဖြစ်သောကြောင့် Online Course နှင့် ရင်းနှီးမှုရှိစေရန် ဉီးစားပေးလေ့ကျင့်ပေးထားပါသည် ➡ နောက်ရက်များတွင် သင်ခန်းစာများကို ထပ်တိုး၍ လေ့ကျင့်ရပါမည် ➡ လေ့လာပြီးသား သင်ခန်းစာများကိုလည်း အချိန်မရွေး ပြန်လေ့ကျင့်၍ ရပါသည် ➡ အောက်ဖက်မှ Mark Complete ကို နှိပ်၍ ထွက်နိုင်ပါသည်